Okwamanje, induku iflothi - ukudoba ezivamile ngenela. Umklamo kuba kahle elula nesingakhangi. Kodwa kanjani wenza kahle izesekeli ke kuncike ekubambeni kahle futhi lula ukusetshenziswa kwama-rod ezinjalo. It liqukethe izingxenye eziningana: induku, esondweni, line ukudoba, iflothi, ingwegwe, umugqa futhi Sinker. Ezimweni eziningi, ngqo ku-induku enamathiselwe loop bese motoviltse ukuthi ukusiza izinkampani emgqeni ukudoba futhi, ngokufanelekile, axube yona sokudlondlobala.
Kalula usebenzisa induku kuncike ngokuyinhloko ukuthi nokuthi is okwenziwe ngobuchwepheshe ahlelwe iluphi usizo lwezinto ezibonakalayo. Iflothi induku eyenziwe carbon fibre, ingilazi noma Izingxube lezi izinto ezimbili. Ngenduku ezenziwe ngengilazi fibre, soft futhi esindayo futhi wenziwe carbon fiber, ngakolunye uhlangothi, nokunwebeka nalezo ezilula khulu.
Ubude induku ihlukile, ubuncane - amamitha amabili, futhi esiphezulu - eziyisithupha. Eminyakeni yamuva, ziya ziba mandla ekusebenziseni heater ohlobo, njengoba mihle kakhulu futhi mancane amathuba okuthi zonke ukugqashula kuyo.
Ngokuphathelene line ukudoba ke konke kuncike lapho ukudoba oyokwenziwa futhi luhlobo luni lwenhlanzi ukuba zibanjwe. Ngokuvamile wukuthi izinhlanzi ezincane, i-ohlabayo ububanzi we line ukudoba. Iflothi induku unganikezwa ngezingwegwe olulodwa, kabili noma kathathu. Ngokuvamile, yebo, wasebenzisa olulodwa. Lezi izingwegwe beze letingemasayizi lahlukene. Basuke ogibele nenduku yokudoba kuye, noma luphi uhlobo kanye nosayizi hook izinhlanzi senzelwe. Ngakho, izingwegwe № 1-3 esetshenziselwa ukubamba izinhlanzi ezincane ezifana nokulandelayo ongenathemba, Misgurnus noma minnows, № 4-6 - I-yegolide, roach, bream futhi bream, № 7-10 - izinhlanzi kahle esikhulu, isibonelo carp noma bream , № 11-15 - for eyikati noma iphezulu.
Iflothi induku kakhulu ngempumelelo esetshenziselwa Pike ku lolo bukhoma. Akuve ubudala futhi kungase kutholakale ngendlela ukuthwebula nomzingeli quirky toothy. Indlela efanayo is arcade esetshenziswa amadamu, amadamu, amachibi amakhulu imifula kanye imisinga omnene. Tackle kufanele libe induku ende nge sekugcineni kanzima isikhathi eside. umugqa Ideal ukudoba 0.3-0.4 mm, enikezwe wagibela Sinker encane nehhuku olulodwa. Esikhathini iflothi kufanele kube buoyancy ezinhle, ngakho kungcono kakhulu sebenzisa wenza Foam noma kukakhokho amagxolo. Ukudoba induku iflothi siyophumelela uma makudle usayizi omkhudlwana futhi ukuma ovoid iflothi e ukuze ugcine lolo. Lapho Ukudoba Pike, njalo sebenzisa leash nehhuku metal nenombolo eyodwa 6-10. Njengoba umlomo wombhobho kungcono uthathe gudgeon, Loach, Isakare, roach emihle noma limfiliba.
Uhlomo lolo inhlanzi gills udebe futhi ngemva kwakhe noma umsila. Bait ezivumelekile ibanga kwesigamu imitha kusuka phansi naphezulu. Lapho kwabangela, iflothi ukunakekelwa induku esithathwayo esandleni futhi ulinde isikhashana. Lokhu kuyadingeka ukuze Pike kugwinywe lolo hhayi off the hook. Isiteleka kumelwe abe ngamandla nangokuzethemba. ukudoba Pike ku induku iflothi emanzini amile ephumelela kakhulu lapho umuntu esetshenziswa ngezikebhe. Ngosizo lwawo ungathola, nokudoba ogwini ezingafinyeleleki izindawo, imihosha, notshani whirlpools, okuyinto ngokuvamile kungagcina eziyingozi.
I-Pskov yizindiza zekusasa
Umuthi 'Triftazin ": yokusetshenziswa, intengo, analogs, ukubuyekezwa. Overdose, imiphumela emibi, futhi ukuqedwa "triftazin"